तनहुँकाे व्यास नगरपालिका–१२ भड्खालामा रहेकाे मत्स्यकन्या आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षक तथा विद्यार्थीले दिउँसोको खाजा चार रुपैयाँमा नै खाँदै आएका छन् । ‘हम हाउस’ नामक एक जापानिज संस्थाले विद्यालयमा खाजा व्यवस्थापनका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । दुई सय विद्यार्थी र १० शिक्षक शिक्षिकाले दैनिक खाजा खाँदा एक जनाको भागमा दैनिक चार रुपैयाँ पर्ने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ललित पाण्डेले बताउनुभयो ।
यस संस्थाले गएकाे भदौदेखि विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएपछि खाजाका लागि सहज भएको छ । प्रधानाध्यापक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘खाजा पकाउने भाडावर्तनदेखि खाने प्लेट, चम्चा, गिलासलगायतका सामग्री सहयोग भएको छ ।’ बढी भएका खानेकुरा फ्याँक्नु नपरोस् भन्ने सोचका यस संस्थाले साथ एक थान फ्रिजसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
व्यास नगरपालिका–१ निर्मल माध्यमिक विद्यालयले नेपाली पम्परागत कला, सीप र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न थालेको छ । यस विद्यालयले विद्यार्थीलाई गुन्द्री बुन्ने, दही मोथ्ने, जाँतो चलाउने, ढिकी कुट्ने, मकै भुट्ने र हलो जोत्नेलगायतका सीप सिकाउन थालेको हो । विषयगत शिक्षाका अलवा विद्यालयमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाएर नयाँ पुस्तालाई पुरानो सीप र संस्कृतिबारे नौलो ढङ्गले प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गरिएको शिक्षक लोकराज सेढाईंले बताउनुभयो ।
संस्कृति र परम्परा लोप हुँदै जान थालेको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि विद्यार्थीलाई यस्ता सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारको नमुना विद्यालयका रुपमा निर्मल माविले इन्टरनेशनल स्कुल अर्वाडसमेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अवार्ड प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत संस्कृति संरक्षण तालिम प्रदान गरिएको कार्यक्रमका संयोजक तथा विद्यालयका शिक्षक महेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।
PrevBreaking News : भर्खरै हेलिकप्टर दुर्घ’टना हुँदा २ मन्त्री सहित ११ जनाको मु’त्यु !
Nextसुटकेसमा ३० करोड बोकेर दुबई फरार हुन लागेकी २० वर्षकी युवती तारा विमानस्थलमा यसरी परिन प्रहरिको फ’न्दामा !
सविता प्रकरणको यथार्थ बल्ल खोले श्रीमान र सासुले, अन्तवार्ता भरि आँशु रोकिएन (भिडियो सहित)